प्रतिभावान बालक : ९ वर्षकै उमेरमा पूरा गरे 'मास्टर्स डिग्री'को अध्ययन Bizshala -
प्रतिभावान बालक : ९ वर्षकै उमेरमा पूरा गरे 'मास्टर्स डिग्री'को अध्ययन
काठमाण्डौ । हामी मास्टर्स डिग्रीसम्म अध्ययन पूरा गर्न कति वर्ष लाग्ला ? रेगुलर पढ्दै जाने हो भने २० वर्ष । अर्थात् नर्सरीबाट मास्टर्स डिग्रीको उपाधि छिटो २३ वर्षको उमेरसम्म हासिल गर्न सकिन्छ ।
बेल्जियमका एक बालकले ९ वर्षकै उमेरमा मास्टर्स डिग्रीको पढाइ पूरा गरे भन्दा सायद अचम्म लाग्न सक्छ । तर यस्तै भएको छ ।
बीबीसीका अनुसार उनी प्राथमिक विद्यालय जाँदा चार वर्षका थिए तर उनका त्यतिबेलाका सहपाठीहरू माध्यमिक कक्षामा पढ्दै गर्दा लराँ सिमोन्सले विश्वविद्यालयको अध्ययन पूरा गर्दैछन्। त्यो पनि नौ वर्षको उमेरमा।
बेल्जियमका सिमोन्सले पहिलो कक्षाको पढाइ सक्न एक वर्ष लगाए। त्यसपछि उनी धेरै छिटो सिक्न थाले र अर्को वर्ष उनी दुईबाट छ कक्षामा गए।
छ वर्षको उमेरमा उनी माध्यामिक विद्यालय गए र छ वर्षको पढाइ १८ महिनामा पूरा गरे। त्यसपछि छोटो समय विश्राम लिन उनले आठ वर्षको उमेरमा उनले छ महिना घरमै बिताए।
आठ महिनाअघि विश्वविद्यालय गएका उनी डिसेम्बरमा दीक्षित हुँदैछन्।
नौ महिना अध्ययन गरेपश्चात उनले आउने डिसेम्बरमा इलेक्ट्रिकल इन्जिनियरिङमा डिग्री हासिल गर्दैछन्। आफूलाई अध्ययनमा यस्तो सफलता कसरी मिल्यो उनलाई थाहा छैन।
बीबीसीको न्यूजडे कार्यक्रमले उनलाई नौ वर्षमा डिग्री कसरी पाउन सफल भए भनेर सोध्दा उनले भने, "मलाई थाहै छैन।"
त्यो चिपले हजारौँ स्नायुहरूलाई एकैपटक मापन गर्दै तिनको अनुगमन गर्छ।उनी चिकित्सकहरूको परिवारबाट आएका हुनाले उनलाई चिकित्साशास्त्र अध्ययन गरेर त्यसैमा विद्यावारिधि हासिल गर्न मन छ। तर उनको महत्त्वकांक्षा अर्कै छ। उनी भन्छन्, "कृत्रिम अङ्ग बनाउने मेरो लक्ष्य छ।"
लराँको उद्देश्य चाहिँ अझै व्यापक छ। "म मानिसको आयु बढाउन चाहन्छु।"
कृत्रिम अङ्गको विकास गर्दै मानव आयु बढाउने र जीवनको गुणस्तर बढाउने उनको उद्देश्य हो।
"म मानवको आयु बढाउन चाहन्छु। मेरा हजुरबुवा र हजुरआमाको आयु पनि बढाउन चाहन्छु," उनी भन्छन्। वास्तवमा उनको तीक्ष्ण बुद्धिको पहिचान उनका हजुरबुबा र हजुरआमाले नै गरेका थिए। त्यतिबेला उनी विद्यालय भर्ना पनि भएका थिएनन्।
"हजुरबुबा र हजुरआमाले उनलाई हुर्काएका हुन् र उनीहरूले लराँमा विलक्षण प्रतिभा भएको उनीहरूले नै पत्ता लगाएका हुन्," लराँका बुवा अलेक्जान्डर सिमोन्स भन्छन्। "तर हामीले उहाँहरूको कुरालाई गम्भीरतापूर्वक लिएकै थिएनौँ।"
उनका प्राथमिक विद्यालयका शिक्षकहरूले पनि उनको प्रतिभा विलक्षण भएको भने।
त्यसपछि उनी कसरी त्यस्तो परिष्कृत भए भनेर आमाबावुले खोज्न थाले।उनको विकासको गति देखेर विज्ञहरू पनि चकित भएका छन्। उनको स्मरणशक्ति एकदमै बलियो थियो र उनको तीक्ष्णता मापन गर्दा उनले १४५ आईक्यू स्कोर पाए।
उनको विश्लेषणात्मक क्षमता पनि गजब नै पाइयो। उनलाई गणित र विज्ञानमा रुचि थियो र पछि भाषाहरूमा पनि चासो दिन थाले। उनी सुरुमा विद्यालयमा त्यति रमाएनन्। समुद्र तटमा गएर खेल्न रुचाए। तर विश्वविद्यालय जान थालेपछि उनले आफ्नै तरिकाले अध्ययन थाले। उनको दैनिकी कठोर लाग्छ।
"सोमवार उनी पढाइको परिचय लिन्छन्, मङ्गलवार प्रयोगशालामा जान्छन्, बुधवार उनी अध्ययनमा लीन हुन्छन् र आठ घन्टासम्म पढ्छन्। बिहीवार शिक्षकहरूलाई भेटेर प्रश्न सोध्छन् र शुक्रवार परीक्षा दिन्छन्," उनका बुवाले भने।
"अरू विद्यार्थीलाई उनको यो चक्र पूरा गर्न १२ हप्ता लाग्छ।"
उनी अहिले नै प्रख्यात छन्। इन्टाग्राममा उनलाई ३५ हजारले पछ्याइरहेका छन् र त्यहाँ उनले रमाइलो गरिरहेका तस्बिरहरू हाल्छन्। कहिले कुकुरसँग हिँडेको, कहिले पौडिरहेको र कहिले सञ्चारमाध्यमसँग कुरा गरिरहेको। "उनले आफू टेलिभिजनमा देखिएकोबारे उनले आफ्ना साथीहरूलाई धाक पनि लगाउँछन्," उनका बुवा भन्छन्।
लराँ केही फरक होलान्?
"उसले सधैँ जे गरिसक्छु भन्छ त्यो काम पूरा गरेरै छोडेको छ," उनका बुवा भन्छन्।
Masters Degree in9years old